फेरी अर्की चर्चित नायीकाको अचानक निधन ! – Online Khabar 24
चर्चित नायीका उमा महेश्वरीको अचानक निधन भएको छ ।
साउथ शो मेट्टी ओली बाट प्रसिद्धि प्राप्त अभिनेत्री उमा महेश्वरीको आइतबार अचानक निधन भएको छ । उमा ४० वर्षकी थिइन् ।
उमाको परिवारमा उनका पति मुरुगन छन्, जो एक पशु चिकित्सक हुन्। थुप्रै दक्षिण भारतीय कलाकारहरुले उनको निधनमा सामाजिक सञ्जालमा उमाको परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
उमाको मृत्युको बारेमा शान्तिले भनिन्, ुउमा महेश्वरी मेरो लागि छोरी जस्तै हुन्। उनको मृत्युको खबर सुनेर म स्तब्ध भएँ।
मलाई थाहा छैन किन भगवानले यति कम उमेर मा मानिसहरुलाई टाढा लैजानुहुन्छ। जब हामी यस्तो घटनाहरु भएको देख्छौं, कहिले काहिँ भगवान को अस्तित्वमा शंका हुन्छ। अभिनेत्री चित्रा वीजेले हामीलाई केहि महिना पहिले छोडेर गइन् र हामी यो घटनालाई अझै सम्हाल्न सकेनौं र यस बीचमा, अब अचानक उमा पनि गइन्। ु
उमा पोलियोबाट पीडित थिइन्यो पनि भनिएको छ कि उमा महेश्वरी विगत केहि महिना देखि पोलियोबाट पीडित थिइन् र उनको उपचार चलिरहेको थियो, तर हालै उनी यो बाट पूर्ण रुपमा निको भईन्। उनलाई फेरि उनलाई सोही रोग बल्झियो , जसको लामो समय सम्म उपचार भैरहेको थियो। उमा महेश्वरी को प्रोजेक्टहरु को बारे मा कुरा गर्दै, उनी मन्जल मागीमाई र ओरु कधैइन कधई नामक शो मा देखिएकी थिइन्। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevमहानायकको ल,डाइ कहिले सम्म ? भुवन र राजेशसँग आक्रो,शित हुँदै रिसा,इन चलचित्रकी छु,च्ची सासु सँगम भण्डारी (भिडियो सहित)
nextदोस्रो बच्चा जन्माउनु अघि महिलाले ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा, नत्र हुनसक्छ यस्तो !